eji igwe akuku igwe akuku igwe
jiri igwe igwe akuku mpempe igwe na nkume Cushing Production E ji esiji nkume na-edozi ya ka e weghaara ya. Onye na-enye nri ma ọ bụ nke na-ekpuchi ihe dị iche iche na-esite na nkume buru ibu site na nkume ndị dị elu nke na-adịghị achọ ka e kpochapụ ihe ndị mbụ, si otú a belata ibu ahụ na crusher. Ihuenyo a na-ekpuchi anya na-ekewa nkume dị elu site na obere nkume. A na-edozi nkume nke dị oke ibu nke na-agafe n'elu ihe nkedo nke ihe nkedo ahụ. Ihe mmepụta site na ... GỤKWUO...
Ụlọ ọrụ Y3S1860F1214 na-akpụgharị ngwa ngwa
edemede si: osisi na-agbagharị agbagharị | | oge: Mee, 2013 | mkpado: osisi na-agbagharị agbagharị
Ejiri mgbochi mkpịsị uhie Y3S1860F1214 Ejiri Y3S1860F1214 na-akpụgharị mkpịsị aka iji kpochapụ ihe mkpofu. Nzuzu azu bu ihe ndi ozo, brik, ngwa agha, ihe ozo, nkume, granite, wdg, nakwa asphalt, concrete na gypsum. Uru nke 3 na-agbagharị ngwa ngwa Y1860S1214F1. 2 na kọmpat na elu-arụ ọrụ. mgbanwe dị mfe nke ebe ọrụ 3. ihe kachasị mma nke 4 na-etipịa. 5 na-arụ ọrụ diesel-generator. nhazi njikwa njikwa 6 dị mfe. nwe ... GỤKWUO...
Ndị na-agbagharị agbagharị na-agagharị agagharị, ndị na-emegharị ihe na-agagharị agagharị na Belgique. A na-eji mpempe akwụkwọ mgbochi na-arụ ọrụ maka ịkụcha obere ihe mpempe akwụkwọ na ọkpụkpụ siri ike, nakwa maka mmepụta nke nkpuchi-dị ka nkume a wara ya, nke abụọ nke na-etipịa ihe dị elu. Ịrụ ọrụ nke nkwekọrịta nwere ike iru 450 t / h. A na-eme ka mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-adabere na PF na-egosi na ọ dị mma. Isi ihe nke a ... GỤKWUO...
igwe na-agbazi ígwè maka igwe ere
Igwe ngwongwo ihe mkpofu maka ihe eji ere Aggregates bu ihe omimi di ka ájá, ajirija, ma o bu nkume a gwakọtara aghara nke, tinyere mmiri na cervia ciment, bu ihe di mkpa n'ime ihe ..Aggregates, nke akuko maka 60 ka 75 pasent nke oke olu nke a na-ekewa, ka ekewawara ya abụọ ụzọ dị iche iche-nke ọma na nke na - enweghị ọnụ. ihe nkwekorita nke ihe nchikota ... GỤKWUO...
130 150 mkpịsị aka mmetụta dị mkpirikpi
130 150 Mgbasa Mgbochi mkpịsị ugodi Ndị ọrụ mmanye siri ike na-enwe mmetụta dị nfe na-emepụta ihe dị iche iche maka mgbatị nke abụọ dị ala. Ndị na-ekpuchi ákwà mgbochi ígwè na ígwè na-emepụta ihe "S" na-eme ka ha na-agba ọsọ na-agba ọsọ na-arụ ọrụ dị elu maka ogologo oge dị n'etiti arụmọrụ ọrụ nhazi. Ntughari ihe na-ebelata nkume site n'eziokwu ... GỤKWUO...
«Previous Page — Next Page »